Ukuqeshiswa kweGqwetha iReal Estate kwisiXeko | Ummeli wezezindlu NJ
Ukuqasha igqwetha lezindlu kunye neJersey City - intlawulo yeflethi kunye nokuvala ngokukhawuleza
ikhaya / Ukuqasha igqwetha lezindlu kunye neJersey City - intlawulo yeflethi kunye nokuvala ngokukhawuleza
Kutheni ufuna igqwetha leeNdawo zeJersey City
Ukuba sele uza kuthenga okanye uthengise ngeeaseti ezinkulu onokuhlala ungazo, kufuneka uqiniseke ukuba amalungelo akho akhuselekile. A Igqwetha lezindlu zeJersey City uya kuthi:
Phendula yonke imibuzo
Ukubonelela ngengcebiso ngokusekelwe kuthengiso ebesikade sisebenza kulo
Sebenzela zonke iingxaki ngegqwetha elinye icala
Siza kuthetha-thethana ngexabiso lentengiso ukuba ubuza kwaye uthethathethane ngeendleko zokulungisa
Ndikukhokele kuyo yonke le nkqubo
Sebenza ngokusondeleyo nabaabolekisi ukuqinisekisa ukuba zonke iimfuno zabo ziyafezekiswa
Beka umhla wokuvala
Ndikuxelele ukuba ingakanani into ekufuneka uyizisele ukuvala ukuba ungumthengi
Hlela i-inshurensi yesihloko kunye nesihloko ukuba ungumthengi
Qinisekisa ukuba nayiphi na imicimbi yesihloko ilungiswa ngaphambi kokuvalwa
Yintoni esingayi kuyenza njengeGqwetha leNtengiso yeZindlu eNew York: Asicwangcisi i-inshurensi yabanini bamakhaya okanye sihlola indlu. Singakunika amagama abantu esingabacebisa ngezi nkonzo.
Imirhumo yethu yezomthetho: Ifemu yethu yomthetho wokuthengiswa kwezindlu kwiJersey City ihlala ihlawulisa i- $ 1,250.00 yokumela umthengi kunye ne- $ 1000.00 yomthengisi. Uninzi lwamagqwetha earhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eNew York bakweli luhlu lwamaxabiso. Singahlawulisa ngaphezulu ukuba kukho imicimbi enzima enjengokuthi ikhaya libe yibhanki, okanye ukusebenza nebhanki kwintengiso emfutshane. Siza kutyobela isigcina-ntloko kunye nawe esivalelayo ngexabiso lethu kwaye asizukudlala umdlalo “weMali efihliweyo.” Njengomzekelo, lumkela naliphi na igqwetha elifuna ukubiza iifizi zescrow xa kuvalwa ukuze nangaliphi na ixesha lihlabe isheke okanye ufumana itshekhi afuna ukukuhlawulisa ngayo $ 150 okanye ngaphezulu.
Izinto ezine umthengi wearhente kwiJersey City kufuneka azazi
"Njenge": Umthetho weNew Real Estate umthetho awuthethi ukuba njengoko unjalo unjalo kwaye uyiloo nto. Abathengi ngokufuthi abayi kubambeka ukuba enye yeenkqubo eziphambili zekhaya ayisebenzi. Ukuba umthengi uthatha ikhaya, kwaye isithando somlilo siyanyibilika emva komhla, umthengisi unokucelwa ukuba alungise loo nto. Umthengisi unoxanduva lokuveza naziphi na “iziphene ezifihliweyo” azaziyo. Oku akuthethi ukuba uhlolo lwekhaya aludingeki. Umthengi kufuneka aqhubeke nokuhlolwa ekhaya.
Uvavanyo lweKhaya: Xa uthenga indlu, kukho amakhulu ezinto ezinokuba ziphosakele. Ukuba uthenga okanye uthengisa indlu eJersey City, eNew Jersey, kunokuba ngaphezulu kweminyaka eyi-100. Kwiminyaka ye-100 kunokwenzeka ukuba ikhaya lithathe iingxaki ezininzi ziya kufunyanwa yingcali eqeqeshiweyo kuphela. Abahloli basekhaya yeyona nto ibinokuthengwa ngayo xa kuthengwa abathengi.
Ixesha lokuPhononongwa kwegqwetha: Oku yi 3 usuku ixesha abathengi kunye nabathengisi abanokuthi izivumelwano zabo ziphononongwe ngalo igqwetha lezindlu eNew Jersey. Eli xesha lisusela kumhla wokusayinwa komthengi kunye nomthengisi, hayi xa abameli befumana inkontrakthi. Nje ukuba amagqwetha aqalise ukujonga ngeli xesha kungandiswa ukuba imicimbi ifunyenwe kwisivumelwano sentengiso.
Izinto ezinokubulala intengiso: ENew Jersey, kulisiko ukuba zonke izivumelwano zezindlu quota kubathengi bafumana imali-mboleko yabo, ukuhlolwa kwamakhaya abangafumani miba iphambili kunye nesihloko esicacileyo kwipropathi. Nangona kunjalo, kukho imicimbi edibanisa ukuthengisa: itanki yeoyile engcwatywayo, isiseko sezikhukula, abaqeshi, ii-liens, njl njl. Ngokusebenzisa igqwetha elinolwazi lokuthengisa izindlu elinamava ngale micimbi kwaye liqinisekisa ukuba izinto ongakhange ucinge ukuba zingaba ngumcimbi igubungele.
Ukuba ufuna ingcebiso ye-realtor, sisebenzisana nabaninzi Realtors Singathanda ukudibana nawe.